Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: What's Ethnic Nationalities' Voice တိုင်းရင်းသားအသံဆိုတာဘာလဲ
Ethnic Nationalities' Voice is the Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination Rights in Burma. " A Justice War Must always Win over an Injustice War".
တိုင်းရင်းသားအသံဆိုတာ တရားမျှတမှု၊တန်တူအခွင့်အရေး၊လွတ်မြောက်ရေး၊စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု။ဒီမိုကရေစီ၊ နှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်ခွင့်အသံများဖြစ်ပါသည်၊ "တရားတဲ့စစ်ပွဲဟာ မတရားတဲ့စစ်ပွဲကို အမြဲအောင်ရမည်"